Profil Aluminum Shina ho an'ny rafitra Window sy trano fanamboarana Curtain Wall ary mpanamboatra | Foen
Ny rindrin'ny efitra lamba misy aluminium dia tsotra hapetraka sy tendrombohitra, saingy tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny isan'ny mety ho tafiditra, izay ahitana: karazan-drano fantson-drano, fitoeran-drano na fantsona fantsona, ary izay manarona takelaka ampiasaina ho an'ny ivelany ivelany. Ao anatin'izany dia azo atao koa ny manorina fikafika (semi-). Ny fananganana anatiny dia ho hitovitovy avokoa.
Profil Aluminium amin'ny fisehoan'ny rindrina rindrina boribory
Fitaovana fananganana CNC: mihoatra ny 50sets, ny famokarana famolavolana isan-taona: 15000 + sombiny
Fanamboarana profil maro no miantoka fa afaka mamolavola sy manangana ity fananganana miaraka amin'ity rafitra ity. Ny vahaolana faran'izay miovaova indrindra dia azo atao amin'ny lafiny famolavolana, ny halatra, ny fanoherana ny afo ary ny faritra miafina. Ny mombamomba rehetra dia zahana amin'ny orinasa ary mila apetraka eny amin'ilay tranokala ihany.
Anaran'ny vokatra: Ny vidin'ny orinasa OEM nanala ny mombamomba aluminium ho an'ny varavarankely sy ny varavarana
Material Grade: Aluminum Alloy 6000 andiany: 6063,6061,6060,6005
mahavita: Anodised, coated coated, sandblasting, electrophoresis, titanium coating coating, poloney, voapetaka, coating PVDF, vita amin'ny hazo sns.
Color: Fotsy fotsy, mainty, volamena, champagne, alimo maizina na araka ny takinao
endrika: Kianja, Round, Flat, araka ny sarin'ny mpanjifa
hateviny: Ambonin'ny 0.8mm, ny volo matevina no tsara kokoa
hamolavola: 1. Afaka mampiasa lasantsy maimaimpoana izahay
2. Manokatra bobongolo vaovao ho toy ny sary ataonao ianao, dia maimaimpoana izany mandra-pahavitan'ny habetsaky ny habetsanao.
3. Ny andro fampandrosoana ny bobongolo dia matetika 10 andro.
Price Ny vidin'ny Ingotaly Ingotaly +
famaritana: A. Length: ≤6.3m
B. Ny hatevin'ny rindrina: ≥1.0mm
C. Ny fanodinana mahazatra: ≥10µm
D. Ny hatevina coating tena: 60-120µm
E. Herin'ny tensile: ≥160mpa
F. tanjaka: ≥110mpa
G. Fanitarana: ≥8%
Type vokatra: Izahay dia manamboatra:
Ny mombamomba aluminium amin'ny fikandrana varavarana sy ny varavarana varavarana, mofomamy fitaterana hafanana aluminium, rindrina lamba eo amin'ny varavarana, fantsom-baravarana aluminium, mombamomba ny fizarana aluminium, ny tranom-baravarankely, mofomamy lehibe, ny mombamomba ny indostria aluminium, ny fantsona aluminium, ny fantsom-bolongana U, ny mombamomba ny T, sns
Applications: Varavarankely sy varavarana aluminium, fisarahana birao, fametrahana mombamomba aluminium, fantsona aluminium, indostrialy, fitaovam-piadiana ara-pitsaboana / dianil, shutter, masom-baravarana, varavaran'ny garazy, rindrina curatin, varavarana sliding, varavarankely lakozia, kabine lakozia, lakana vita amin'ny aluminium, andry aluminium, lalamby aluminium
Ny antsipiriany fonosana Taratasin'i Kraft, EPE Fram, sarimihetsika Shrink, taratasy Composite na araka izay ilainao
MOQ: Miorina amin'ny habe, 0.5-10tons
Ora nanomezana: 15-30 andro raha efa vonona ny bobongolo
Sora fandaharana ara-dalàna: 1. Hamarino ny sary, loko ary ny vidiny
2. Aloavy ny saram-panao ary manomboka manamboatra bobongolo isika
3. Mandefa santionany aminao izahay ho fanamafisana anao
4. Ataovy ny fandoavana ny vola 30%, manomboka ny famokarana
Previous: Tariby an'ny masoandro
Manaraka: Profil Aluminium amin'ny fananganana